Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka Mallorca – Gool FM
Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka Mallorca
Dajiye June 23, 2020
(Madrid) 23 Juun 2020. Zinedine Zidane ayaa wuxuu ku dhawaaqay liiska xiddigaha kooxdiisa Real Madrid ee kaga qeyb galaya kulanka Mallorca ee horyaalka La Liga.
Macalin Zinedine Zidane iyo wiilashiisa ayaa waxay isku diyaarinayaan kulanka horyaalka La Liga ay habeen dambe kula ciyaari doonaan kooxda Mallorca garoonka Alfredo Di Stefano kaasoo qeyb ka ah kulamada 31-aad ee xilli ciyaareedkan.
Zinedine Zidane ayaa wuxuu liiskan ugu yeeray 23-ka ciyaaryahan ee kaga qeyb gali doona kulanka Mallorca, balse waxaa liiskan laga waayay oo ka maqan xiddigaha kala ah Lucas Vázquez, Luka Jović, iyo Nacho Fernandez, sidoo kale waxaa liiskan sababa la xiriira ganaax kaga maqan xiddiga reer Brazil ee Casemiro.
Waxaa taasi badalkeeda liiskan lagu arkay inuu ku soo laabtay Isco oo labadii kulan la soo dhaafay ku maqnaa dhaawac ka soo gaaray dhanka jilibka lugta midig, taasoo Zidane fursad u siineysa inuu heli karo adeegiisa kulanka habeen dambe ee Mallorca.
Haddaba halka hoose kaga boggo liiska xiddigaha kooxda Real Madrid uu ku dhawaaqay tababare Zinedine Zidane, kuwaasoo ka qeyb galaya kulanka Mallorca ee horyaalka La Liga dalka Spain:
RASMI: Ciyaaryahan weyn oo laga helay coronavirus
Miyuu Maxamed Saalax diyaar u yahay kulanka Crystal Palace? Klopp ayaa ka jawaabaya